मत्थु चिकित्सकले नर्ससँग दुर्व्यवहार गरेपछि बबाल – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsमत्थु चिकित्सकले नर्ससँग दुर्व्यवहार गरेपछि बबाल
मत्थु चिकित्सकले नर्ससँग दुर्व्यवहार गरेपछि बबाल
August 18, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, सिलगढी 0
सिलगढ़ी: सिलगढ़ी जिल्ला अस्पतालमा एक मत्थु चिकित्सकले नर्स इन चार्जलाई दुर्व्यवहार गरेको घटनाले शहरमा सनसनी फैलिएको छ। घटनापछि अस्पतालमा बबाल मच्चिएको छ।
बिधवार राति अस्पतालमा सेवारत नर्स सोनु गुप्ताको हठात शरीर बिग्रिएपछि उनी ड. सुमन विश्वासकहाँ चिकित्सा सहायता माग्न गइन्। विश्वास आपतकालीन ओपीडी प्रभारी हुन्। चिकित्सकले आफ्नै अस्पतालमा कार्यरत नर्सको चिकित्सा गर्न सोझै अस्वीकार गरिदिए।
सोनुले घटनाको जानकारी नर्स प्रभारी शम्पा मण्डललाई तुरुन्तै गराइन्।
नर्स प्रभारी मण्डल उक्त चिकित्सककहाँ गएर घटनाको जानकारी लिइन् र समस्याको समाधान गरिदिने उजुर गरिन्। त्यसपछि चिकित्सक विश्वासले मण्डलसँग दुर्व्यवहार गर्दै अपमानित गरेको आरोप लगाइएको छ। नर्सहरूले चिकित्सक मातेको अवस्थामा रहेको आरोप लगाएका छन्।
उक्त घटनापछि नर्सहरूले ड. विश्वासको विरोधमा सिलगढ़ी पुलिस स्टेशनमा २ बजी नालिस गरेको खबर छ। विक्षुब्ध नर्सहरूको टोलीले अस्पताल निरीक्षकलाई नालिस गर्दा उनले नालिस लिन अस्वीकार गरेपछि उनीहरू थानाको दैलो ढकढकाउन बाध्य बनेका थिए।
आन्दोलनरत दार्जीलिङ : केही झलक